Sezikulungele ukufunda ezinye izikole | IOL Isolezwe
Sezikulungele ukufunda ezinye izikole
Isolezwe / 16 January 2013, 1:51pm /
MHLENGI SHANGASE noBONISWA MOHALE
NJENGOBA namhlanje kuvulwa izikole ezindaweni ezigudle ugu okubalwa neKwaZulu-Natal, abafundi ababalelwa ku-250 000 bazongena ngokokuqala ngqa esikoleni bezokwenza uGrade 1.
Laba bafundi benza u-1 million wabafundi abazokwenza leli banga ezweni lonke njengoba lesi sifundazwe sihamba phambili ngesibalo sabafundi ezikoleni.
UMnyango wezeMfundo ufuna ukuthi eminyakeni emithathu ezayo sinyuke isibalo sabafunda ezikoleni zesifundazwe babe ngu-3 million. Okwamanje bangu-2.8 million.
UDkt Nkosinathi Sishi, oyinhloko yalo mnyango, uthe kuzoba nezinguquko emfundweni ikakhulu kwaGrade 4, 5 no-Grade 6.
USishi uthe zizokwehliswa izifundo ezenziwa ngabafundi kula mabanga zisuka kweziyisishiyagalombili ziye kwezeyisithupha.
“Kuzohlanganiswa izifundo, ezobuciko zizohlanganiswa ne-life orientation, kuthi ezobuchwepheshe zihlanganiswe nesayensi. Lezi zifundo ziyadlelana kanti kuzonika isikhathi esiningi manje sokuthi zenziwe uma sezihlanganisiwe,” kusho uSishi.
Uthe bazobhalela bonke abazali bezingane ezizokwenza uGrade 1 bebazisa ukuthi yiziphi izinto okumele bazilindele nanokuthi yikuphi lapho kumele babhekisise khona ngoba bafuna ukuthi babambe iqhaza emfundweni yezingane zabo.
Uqhube wathi uyehliswa nomthwalo obhekene nothisha wathi uhlelo lokuphucula imfundo i-Curriculum Assessments Policy Statements (Caps) ebalula ukuthi isifundo kumele sifundwe isikhathi esingakanani nezinto okumele zifundwe, izofakwa kulokhu kwaGrade 4, 5, 6 noGrade 11.
“Ngonyaka ozayo iCaps izofakwa kwaGrade 7, 8, 9 noMatric. Uhlelo lokuthi isiNgisi sifundwe zisuka amadaka luvele lukhona, ngakho lezi ezinye izinhlelo zizoqinisa lapho sivele sigijima khona,” kusho uSishi.
USishi ugxeke kakhulu othishanhloko abasaqhubeka nokubamba imiphumela yabafundi ngoba bengayikhokhile imali yesikole noma belahle izincwadi.
ELihlithemba Comprehensive eNdwedwe uthishanhloko wakhona ubambe imiphumela yabafundi abangazange bawukhokhe “umnikelo” ka-R130 ayewuclelile.
Omunye wabazali okhulume neSolezwe ocele ukungadalulwa, uthe lesi sikole akukhokhwa nhlobo kusona imali yokufunda kodwa uthishanhloko uyifuna ngodli.
“Akukhokhwa nhlobo kulesi sikole kodwa uthishanhloko wacela ukuthi sinikele ukuze kukwazi ukukhokhela ezinye izinto. Abazali kuphoqeleke ukuthi bayoboleka izimali bengenazo ngoba uthishanhloko ugweve namaripoti,” kusho lo mzali.
USishi uthe babathathela izinyathelo abenza lokhu ngoba bahlezi belishumayela leli vangelo lokuthi imiphumela ingabanjwa.
“Othishanhloko abenza lokhu ababikwe ngoba sihlezi sishumayela ivangeli lokuthi ayingabanjwa imiphumela. Kuyicala elibovu ukubamba imiphumela yomfundi angiyiphathi-ke uma isikole singakhokhisi mali,” kusho uSishi.
Izolo esikoleni samabanga aphezulu esiseNanda iZiphembeleni Secondary School, othisha bebematasa belungiselela ukuvulwa kwezikole.
Okuphawulekayo ngalesi sikole wukuthi utshani bebunqunyiwe, othisha bephethe ama-timetable abo futhi nohlu lwezingane ezizofunda emakilasini ahlukene selukhona.
Ngokusho kukaMnuz Khetha Dladla oyiNhloko yesifundo zeSayensi kulesi sikole, izingane zizoqala ukufunda namhlanje ngoba bona sebekulungele ukufundisa.
Uthe izingane zabo angeke zibe wuvanzi namuhla ngoba wonke uthisha uyazi ukuthi uzobe ekuphi.
Yize bekusafika izingane ezizocela isikhala sokufunda kulesi sikole, uDladla uthe bazozibheka kodwa lezo abanazo ezingu-689 seziyazi ukuthi zizofunda kuphi.
Labo abanenkinga yokubhalisa ezikoleni noma ngabe ngeyezincwadi ezingafikanga bangafonela ku-0860596363 okuyinombolo yesikhungo soMnyango wezeMfundo esizobhekela izinkinga ezikoleni.